उपमेयर – बाह्रथरी कुरा
बिद्यानास्… यसरी सुन्दर हुनेछ रानीपोखरी
यतिबेला रानीपोखरीको पुनर्निर्माणलाई लिएर ठुलो बहश छेडिएको छ काठमाडौं खाल्डोमा। सिमेन्टको प्रयोग गरेर रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्नु मौलिक संस्कृतिमाथि धावाको हो भनि दाबी गरिरहेका छन् केही मान्छेहरु। उता काठमाडौंका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्य भने रानीपोखरीलाई आधुनिक पोखरी बनाएर कफी बेच्ने योजना सुनाइरहनुभको छ। यस्तोमा १२ थरीजस्तो जिम्मेवार हावा छेकुवा ब्लग चुपचाप बस्न सुहाउने कुरै भएन। त्यसैले रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्बन्धमा हाम्रो धारणा र योजना के छ भन्नेबारे हामी आज स्पष्ट पार्न चाहान्छौं। अत: आदरणीय पाठकवृन्दलाई कार्यक्रम शुरु गर्नुअघि आआफ्नो स्थानमा सीट बेल्ट वा कम्बर बेल्ट बाँधेर आसनग्रहण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं। Continue reading →
Posted on December 24, 2017 by Boston	5
जम्ला हात गरें है हजुर ! परे त धनुष्टंकारै पनि पर्न सक्छु। चुनावको माहोल जो छ, भोट जो माग्नु छ । सुरुमा काठमाडौं अनि देश जो बनाउनुछ। हेर्नुस् मुलधारका मेडिया र हेभिवेट पत्रकारहरुले एक एक पार्टी बोक्या छन्। हामीले के महशुस गर्यौं भने जसको कोही छैन, उसको बाह्रथरी छ भन्ने बनाउनुछ। निर्धोले बोल्न सकेन भने त्यसको आवाज १२ थरी बनिदिनुपर्छ। परिवर्तनको संवाहक बनिदिनुपर्छ। हुनत यसअघि १२ थरीले कांग्रेस र एमालेलाई भोट मागेको पनि हो। तर हामी यसपालीको यो लेखमा अलि गम्भीर भएर साँच्चै नै राजधानीको हितको लागि र हामी सबैले गर्व गर्नसक्ने राजधानीको परिकल्पनाको लागि भोट मागिरहेका छौं। हुन पनि कस्तो परो भने बिबिसीमा काम गरेका घाघडन पत्रकार रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टीको चर्चा सामाजिक संजालमै मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने लागिरा’छ। त्यत्रो लाखौंको जागिर छाडेर देश बनाउँछु भनेर लागेका मान्छेको पार्टीले सुरुमै पानी समेत खान पाएनन् भने सबै नेपालीलाई गौहत्याको भन्दा बढ्ता पाप लाग्छ। त्योभन्दा पनि बढी काठमाडौं र ललितपुरका मेयर उपमेयरका उमेदवारको तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने पनि साझा पार्टीका उमेदवार अग्रपंक्तिमा आउँछन्। आजको लेखमा हामी साझा पार्टीका उम्मेदवारलाई किन जिताउने भन्ने तर्कनामा केन्द्रित रहनेछौं। Continue reading →
Posted on May 7, 2017 by Golf	0
भोट के मा?
नमस्कार पाठकज्युहरु ! आजभोलि जे लेखे नि सबैभन्दा पहिला पाठकलाई दश औंला नजोडी लेख्ने आँटै आम्दैन। पाठक नै हाम्रा भगवान हुन्, पाठक नै हाम्रा सम्पति हुन्। अनि यिनै पाठक नै हाम्रा हनुमान हुन्, जे लेखे नि जय राम जी कि गर्दिन्छन्। सल्लाह सुझाव त भुत्राले नि दिन्नन्, लेख्यो कि वाह वाह ! गर्न थाल्छन्। रचनात्मक प्रतिक्रिया त सुरुवाती बखतदेखि नै पाइएको छैन। मन परे नि ताली, मन नपरे नि ताली, यस्ता हनुमान त तित्रा बिश्वराज ध्वजे जस्ता पार्टीका हनुमान नि छैनन् जस्तो लाउँच बेलाबेला त। चुनाउ आम्न लाग्या भएर भोट के मा हाल्ने भनेर लेख्न थाल्या, आफ्नै पाठकको खेदो खन्न थालिएछ। क्या बाटो बिराइएछ भन्देखुन्। सप्पैलाई था’ह छ बरु मुकुन्देले केटी पाएर ब्या गर्ला तर यो देशाँ चुनाउ हुन बहुतै गाह्रो छ। त्यही नि सबैले चर्चा गरेको चुनाउको बारेमा नलेखि बस्दा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र नमान्नेहरु रचन् यी १२थरीवाला भन्नोला भनेर कनी कनी कुन चिन्हमा भोट हाल्ने भनेर ब्याख्या गर्ने जमर्को गरेका छौं। १२ हात लामो मत पत्रमा डेढ दुइसय थरी चिन्ह छन्। सबैको बारेमा नि लेखेर सकिन्न हेर्नुस्। यसो माथिल्ला केही हरपाँ अटाएका चिन्हको बारेमा लेख्न पर्ला।
Posted on April 21, 2017 by Charlie	1